Smartwatch: ny maodely, ny vaovao, ny fampianarana tsara indrindra ary maro hafa! - Androidsis | Androidsis (Pejy 2)
Xiaomi Mi Band 6: GPS, sensor oxygen oxygen ary mifanaraka amin'ny Alexa
Efa fantatsika ny sasany amin'ireo tombony atolotry ny andiany manaraka amin'ny Xiaomi Mi Band
Vitan'i Google ny fividianana Fitbit
Naharitra herintaona mahery vao natolotry ny Vondrona eropeana an'i Google hividy Fitbit
Ny OnePlus Band dia nambara tamin'ny sensor SpO2 sy ny fahaleovan-tena hatramin'ny 2 herinandro
Ny OnePlus Band dia nambara tamin'ny fomba ofisialy tamina fiasa mahaliana sasany. Ampahafantarinay isaky ny teboka ny mombamomba anao rehetra.
Sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus Band
OnePlus dia nanaparitaka ankolaka ny sary voalohany momba ny fehin-tànana voalohany nanisa natao Batemy ho an'ny OnePlus Band
Ny bracelet miisa isa OnePlus dia haseho amin'ny 11 Janoary
Ny fidirana voalohany an'ny OnePlus eo amin'ny tontolon'ny famatrarana fehin-tànana dia ny OnePlus Band haseho amin'ny 11 Janoary any India.
Mbola tsy fantatra izay homena an'i Reyes? Miaraka amin'ny fitaovana elektronika ho marina foana ianao
Raha mbola tsy fantatrao izay homena ao Reyes, amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fitaovana elektronika marobe izahay.
Ny akanjo OnePlus voalohany dia ho fehin-tànana miisa
Ny finday avo lenta OnePlus voalohany dia tsy ho famantaranandro marani-tsaina, fa fehin-tànana miisa isa, hoy ny Android Central
OnePlus dia handefa ny smartwatch voalohany amin'ny fiandohan'ny 2021
Ny smartwatch OnePlus voalohany dia hamely ny tsena mandritra ny telovolana voalohany amin'ny 2021, araka ny nambaran'i Peter Lau
Realme dia manambara ny Watch S Pro, Watch S Master Edition ary ny Buds Air Pro Master Edition
Realme dia nanambara ny Watch S Pro, Watch S Master Edition ary Buds Air Pro Master Edition. Famantaranandro vaovao roa sy headset vaovao.
Xiaomi Mi Watch Lite dia nambara tamin'ny fandrefesana SpO2 sy ny fizakantenany hatramin'ny 9 andro
Xiaomi dia nanambara ny smartwatch vaovao Xiaomi Mi Watch Lite, tarika manan-danja sy kalitao vaovao. Ianaro eto daholo ny momba azy.
Cubot dia mandefa ny C3 Smartwatch amin'ny $ 32,99 fotsiny miaraka amin'ny fanomezana
Cubot dia mandefa C3, smartwatch vaovao amin'ny $ 32,99 fotsiny amin'ny 10 Desambra. Ny mpanamboatra koa manao raffle.
Disney sy Vodafone dia manambatra ny hery hamoronana an'i Neo, famantaranandro ho an'ny ankizy
Tonga i Neo avy any Vodafone, famantaranandro namboarin'i Disney, manintona ny ankizy, hahafahantsika mametraka azy ireo amin'ny fotoana tena izy
ZTE Watch Live dia famantaranandro vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena hatramin'ny 21 andro
ZTE dia nanambara ny smartwatch ZTE Watch Live vaovao miaraka amin'ny fizakantenany hatramin'ny 21 andro. Fantaro ny antsipiriany rehetra amin'ny smartwatch vaovao.
Redmi Watch dia ambara miaraka amin'ny efijery miloko sy fahaleovan-tena mandritra ny herinandro
Redmi Watch dia nambara tamim-pomba ofisialy ho toy ny smartwatch vaovao mahaliana noho ny fanampiny sy ny vidiny mirary. Mianara bebe kokoa momba ilay fitaovana.
Ny Galaxy Watch 3 dia mahazo fihatsarana amin'ny metatra ôksizenan'ny rà
Ny Samsung Galaxy Watch 3 dia mahazo fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fanatsarana ny fandrefesana oksizenina sy ny fitaovam-pandrenesana
Ny Fitbit Sense sy ny Versa 3 dia nohavaozina nahazo fanohanana ny mpanampy Google
Ny maodely Fitibt Sense sy Versa 3 dia navaozina mba hifanaraka amin'ny Google Assistant amin'ny fidirana amin'ny Alexa.
Ny Samsung Galaxy Watch dia mamela anao haka pikantsary, hazavainay ny fomba hitondrana azy ireo mora sy haingana.
Samsung's Galaxy Fit 2 dia efa misy any Espana izao amin'ny vidiny 49 euro
Ny fehin-tànana vaovao an'ny Samsung, ny Galaxy Fit 2 dia efa misy any Espana izao amin'ny 49 euro.
Honor dia nanambara ny smartband Honor Band 6 vaovao, fandaharana marani-tsaina izay mitaky fihazakazahana hatramin'ny taranaka fara mandimby. Fantaro ny momba azy rehetra.
Lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ny smartwatch Realme Watch S, famantaranandro mora vidy miaraka amina endrika marobe.
Amazfit Pop, arak'izany ny smartwatch vaovao mora vidy avy any Huami
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny famolavolana sy ny toetra ara-teknikan'ny Amazfit Pop, rindrambaiko vaovao mora vidy Huami.
Araraoty ny fihenam-bidy 40 isan-jato hividianana ny realme Watch amin'ny vidiny 29,99 euro fotsiny noho ny fetin'ny praiminisitra 2020
Sony Wena 3: Tarika marani-tsaina vaovao misy fizakan-tena mandritra ny herinandro iray ary fanohanana Alexa
Sony Wena 3 dia nambaran'ny Japoney ho tarika marani-tsaina manintona tokoa. Fantaro ny antsipiriany rehetra momba ity fitaovana vaovao ity.
Samsung dia mampihetsika ny ECG ao amin'ny Galaxy Watch 3 sy Watch Active 2
Ny fampiasa mamela anao hanao electrocardiograms amin'ny Samsung Galaxy Watch dia misy amin'ny Watch 3 sy Watch Active 2 izao
Ambaratonga ny Amazfit Band 5: Tarika marani-tsaina vaovao manana fizakan-tena 15 andro sy Alexa namboarina
Amazfit Band 5 dia nambaran'ny Xiaomi ho tarika manan-tsaina vaovao manandanja indrindra eo amin'ny tsena. Fantaro ny miavaka rehetra voalaza ao.
Vodafone sy Disney dia manambatra hery: handefa smartwatch ho an'ny Krismasy izy ireo
Vodafone dia nanambara fifanarahana fiaraha-miasa amin'i Disney hanangana smartwatch ho an'ny ankizy amin'ity Krismasy ity. Lazainay aminao ny pitsopitsony.
Ny Huawei Watch GT2 Pro dia ofisialy izao
Ny mpanamboatra aziatika dia nanolotra ny Huawei Watch GT2 Pro vaovao, smartwatch izay manome fahaleovan-tena tena tsara sy maro hafa.
Ny Galaxy Watch Active 2 dia hahazo fampiasa mitovy amin'ny Galaxy Watch 3
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny Galaxy Watch Active 2 dia hahazo ampahany betsaka amin'ny vaovao momba ny rindrambaiko hita ao amin'ny Galaxy Watch 3 izay natomboka vao haingana
OnePlus dia hanomana smartwatch, ny OnePlus Watch
Efa nanandrana tamin'ny 2016 izy ireo, ary toa efa an-dàlana izao ny zava-drehetra ho amin'ny OnePlus Watch, famantaranandro voalohany nataon'i Lau.
Ny Samsung Galaxy Watch 3 dia ofisialy izao: famolavolana sy endri-javatra
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny Samsung Galaxy Watch 3, ilay smartwatch Samsung vaovao hifaninana amin'ny Apple Watch 5
Unboxing ny Galaxy Watch 3 alohan'ny fampisehoana ofisialy azy
Herinandro talohan'ny fampisehoana azy dia efa navoaka tamin'ny internet ny tsikera voalohany sy ny tsy fandefasana boaty an'ny Galaxy Watch 3
Sivanina ny famolavolana sy ny fiasa amin'ny Samsung Galaxy Watch 3
Ny famolavolana sy ny endri-javatra amin'ny Samsung Galaxy Watch 3, ny smartwatch manaraka an'ny Samsung izay mirehareha amin'ny endri-javatra avo lenta, dia tafaporitsaka.
Ny Galaxy Watch 3 dia hampiditra detector fall and control fihetsika
Ny taranaka manaraka an'ny Galaxy Watch dia hampiditra fiasa vaovao roa: ny fifehezana ny fihetsika sy ny mpitsikilo
Nambara i Xiaomi Mi Band 4C: Tarika fanatanjahantena vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena 14 andro
Xiaomi dia nanambara ny Mi Band 4C, smartband fanatanjahan-tena vaovao izay ho lasa safidy lehibe any Azia hatramin'ny nanombohany.
Ireo ny sasany amin'ireo fiasa vaovao izay ho avy amin'ny tanan'ny Galaxy Watch 3
Efa fantatsika ny sasany amin'ireo fiasa izay ho avy amin'ny tanan'ny Galaxy Watch 3 manaraka izay hamely ny tsena amin'ny herinandro ho avy.
Azonao atao ny mamoha Windows 10 amin'ny Xiaomi Mi Band anao
Azavainay ny dingana manaraka mba hahafahana mamoha Windows 10 amin'ny alàlan'ny Xiaomi Mi Band amin'ny fomba tena tsotra. Segondra iray monja no ilaina!
Ny Huawei Mate Watch dia miloka amin'ny rafitra fiasany manokana
Ny tsaho farany dia milaza fa ho tonga ny smartwatch Huawei Mate Watch miaraka amin'ny rafitra fiasan'ny HarmonyOS, ary hamela ny Android Wear.
Sivanina ny interface sy ny endri-javatra an'ny Samsung Galaxy Watch 3
Navoaka ny interface interface, ho fanampin'ny toetra farany teknikan'ny famantaranandro Samsung Galaxy Watch 3 ho avy avy amin'ny mpanamboatra.
Samsung Galaxy Watch 3 tafaporitsaka tamin'ny bezel mihodina!
Lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ny Samsung Galaxy Watch 3, ny smartwatch manaraka an'ny mpanamboatra izay ho tonga feno vaovao, ao anatin'izany ny dial mihodina.
Nambara ny Oppo Band: Fehin-tànana marani-tsaina vaovao miaraka amin'ny NFC ary mizaka tena 14 andro
Oppo dia nanambara ny fehin-tànana maranitra vaovao antsoina hoe Oppo Band. Tontonana AMOLED, Bluetooth ary maro hafa amin'ny vidiny antonony. Mianara bebe kokoa momba azy eto.
Ny Samsung Galaxy Watch 3 dia hamerina ny fiasa tena irina indrindra
Vaovao mahafaly ho an'ireo tia ny fianakaviana smartwatch an'ny mpamokatra Koreana. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria, ny Samsung Galaxy Watch 2 dia hitondra fahatairana.
Ny Huawei Watch GT2 sy GT2 Lite dia navaozina ho mpiara-miombon'antoka tsara indrindra amin'ny fakantsary finday
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny fanavaozana vaovao an'ny Huawei Watch GT2 sy GT2e, izay misy fomba iray hakana sary lavitra.
realme dia manolotra ny fanolorantenany amin'ny smartwatches miaraka amin'ny realme Watch
Ny Aziatika dia manamafy ny realme, orinasa iray izay nampifantoka ny tsenany amin'i India, izay vao nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fanoloran-tenany ho an'ny ...
Hanohana an'i Amazon's Alexa ny Xiaomi Mi Band 5
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny Mi Band 5 dia manome soso-kevitra fa afaka manolotra fanampiana ho an'ny mpanampy an'i Amazon manokana, Alexa, metatra oxygen oxygen ary maro hafa.
Amazfit Ares, ity no famantaranandro Xiaomi vaovao miaraka amin'ny bateria tsy mety ritra
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny Amazfit Ares, famantaranandro vaovao Xiaomi izay mirehareha amin'ny endrika avo lenta, fampisehoana, bateria ary vidiny.
Blackview dia mandefa smartwatch X1 ary mandanjalanja telefaona finday Android, BV5500 Plus
Blackview dia nanambara vokatra vaovao roa: Blackview X1 dia smartwatch iray faran'izay tsara sy telefaona misavoana BV5500 Plus.
Azonao atao izao ny mividy ny Honor Magic Watch 2 vaovao
Azo alaina izao amin'ny alàlan'ny fivarotana Honor any Espana, ny kinova vaovao an'ny Honor Magic Watch 2, smartwatch nohavaozina izay mitazona vidiny lafo
Samsung no mpanamboatra smartwatches faharoa lehibe indrindra nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2020
Na eo aza ny fihenan'ny tsenany amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2020, Samsung dia mitana ny laharana faharoa amin'ny varotra manerantany.
Ny Galaxy Watch an'ny Samsung vaovao dia efa akaiky ny tsena
Ny Galaxy Watch vaovao an'ny Samsung dia nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny governemanta sinoa, noho izany ny famoahana azy dia tsy tokony ho ela.
Redmi Band dia ofisialy: Mampanantena fizakan-tena 14 andro
Redmi Band no tarika marani-tsaina vaovao manana fahaleovan-tena lehibe ary manana efijery OLED mikasika lehibe hanaraha-maso ny fanatanjahantena.
Xiaomi Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro, famantaranandro ho an'ny ankizy vaovao misy efijery AMOLED sy fifandraisana 4G
Xiaomi dia nanolotra ny smartwatches Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro vaovao, rindrambaiko roa natao ho an'ny ankizy kely ao an-trano.
Ho tonga anio ny Redmi Band ary hanao izany amin'ny loko isan-karazany
Redmi miloka amin'ny sehatry ny tarika mahay miaraka amin'i Band, filokana izay hatolotra amin'ny fomba ofisialy anio any Shina.
Ny TAG Heuer smartwatch, manohy miloka amin'ny Wear OS
Ilay mpanamboatra Soisa TAG Heuer dia nanolotra modely vaovao amin'ny andiany Connected, tantanin'ny, toy ny teo aloha, avy amin'ny Wear OS
Oppo Watch dia ofisialy: Tonga miaraka amin'ny Color OS sy amin'ny habe roa izy
Oppo dia nanambara tamim-pomba ofisialy ny Watch, famantaranandro marani-tsaina izay misy karazany roa samy hafa ary manome fizakantena lehibe.
Ny smartwatch an'ny Oppo, ny Oppo Watch Series, naseho tamin'ny 6 martsa
Amin'ny 6 martsa, ny Oppo smartwatch, ny Oppo Watch Series, dia naseho tamin'ny fomba ofisialy, izay idiran'ity mpanamboatra ity amin'ny smartwatches
Realme Band dia nanambara ny antsipiriany alohan'ny hanolorana azy amin'ny 5 martsa
Realme dia hanomboka amin'ny 5 martsa ny smartwatch vaovao, fantatra amin'ny anarana hoe Band. Ho tonga miaraka amin'ireo telefaona Realme 6 sy Realme 6 Pro vaovao izy io.
Fivoahan'ny smartwatch an'i Oppo amin'ny alàlan'ny Google Wear OS
Navoaka ny sary vaovao iray amin'ny smartpatch Oppo, izay ny tanjony dia ny hiarahana amin'ny Oppo Find X2 amin'ny volana martsa.
Samsung Gear S2 dia mahazo fanavaozana vaovao lehibe
Samsung dia nanapa-kevitra ny hanavao ny smartwatch Gear S2 rehefa afaka kelikely. Izany dia amin'ny fanatsarana miavaka, ao anatin'izany ny fanomezana fahaleovan-tena tsara kokoa.
Puma PT9100, smartwatch vaovao misy 250 euro
Puma dia nanangana smartwatch vaovao miaraka amin'ny maodely T9100 ary misy amin'ny tsena indiana hatramin'ny voalohany.
Honor dia manambara ny fijerena MagicWatch 2 Limited Edition
Manambara ny famantaranandro vaovao an'ny MagicWatch 2 Limited Edition i Honor, tonga miaraka amina endrika mahasahy sy fizakan-tena lehibe mandritra ny tapa-bolana.
Mi Band 5 an'ny Xiaomi dia hanana efijery lehibe kokoa sy fanohanana NFC ho an'ny rehetra
Ny taranaka fahadimy an'ny Mi Band 5 dia afaka mampiditra efijery lehibe kokoa sy GPS manerantany.
Xiaomi dia mandefa Mitu Children's Learning Watch 4Pro
Xiaomi dia nanambara ny Mitu Children's Learning Watch 4Pro vaovao izay ao an-tsaina ireo ankizy kely. Famantaranandro lehibe misy rindranasa maro.
Xiaomi Watch Color dia aseho amin'ny fomba ofisialy
Xiaomi dia manao ny ofisialin'ny Watch Color ho toy ny ofisialy any Shina taorian'ny fivoahana isan-karazany amin'ny fitaovana fampiasa sy be fampiasa.
Ny Amazfit- T-Rex vaovao, haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 8 Janoary
Amin'ny 8 Janoary, hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny smartwatch vaovao i Huani, ny Amazfit T-Rex, smarwatch mahatohitra natao ho an'ny atleta
Xiaomi dia nanambara ny famantaranandro Watch Color ho an'ny 3 Janoary
Xiaomi dia nanambara ny smartwatch Watch Color ho an'ny 3 Janoary ao Shina. Afaka misafidy loko mihoatra ny 1.000 isika.
Xiaomi Mi Watch Premium Edition dia nahemotra hatramin'ny volana feb
Ny kinova Premium Edition an'ny Xiaomi's Mi Watch dia manemotra ny famoahana azy. Ny mpanamboatra dia maniry hanana fotoana bebe kokoa hanitarana ny tahiry.
Ny varotra azo zahana dia mitombo hatrany manerantany
Wearables dia manohy mampitombo ny varotra eran'izao tontolo izao amin'ny hafainganana, araka ny naseho tamin'ny fanadihadiana vaovao navoaka tamin'ity herinandro ity.
Galaxy Watch Active nataon'i TOUS hevitra
Androany dia miresaka gadget iray tena manokana ho an'ny mpijery vehivavy izahay. Nanam-bintana izahay afaka niatrika fitsapana nandritra ...
Google dia nanamboatra ny Play Store misy amin'ny Wear OS
Google dia nanamboatra endrika ny Play OS Play Store, ankehitriny mampiseho famolavolana mazava kokoa noho ny kinova taloha, ho fanatsarana ny fampiasana azy eo amin'ireo mpampiasa.
Ny varotra Smartwatch dia mitombo 42% amin'ny telovolana fahatelo
Fantaro bebe kokoa ny fitomboan'ny varotra smartwatch manerantany mandritra ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity araka izay efa nambara.
Redmi koa dia miasa amin'ny rindrambaiko manokana
Fantaro bebe kokoa momba ny fanamafisana fa misy ny Redmi Watch amin'ny fampandrosoana ary hiditra amin'ny fomba ofisialy eny an-tsena afaka volana vitsivitsy.
Ny Fossil Hybrid HR vaovao dia miala amin'ny Wear OS
Ny fizakantenan'ny smartwatches dia nanjary olana tamin'ny mpampiasa maro hatrizay, olana miankina amin'ny fahitanao azy, hatramin'ny ...
Xiaomi Mi Watch: ny smartwatch voalohany an'i Xiaomi dia ofisialy
Fantaro ny zava-drehetra momba ny Xiaomi Mi Watch, famantaranandro voalohany an'ny marika sinoa mampiasa ny Wear OS ho rafitra fiasa efa natolotra.
OnePlus dia mety miasa amin'ny smartwatch
Fantaro bebe kokoa ny tsaho avy amin'ny haino aman-jery isan-karazany fa miasa amin'ny smartwatch voalohany ho an'ny 2020 ny OnePlus.
Xiaomi dia mampiseho ny smartwatch amin'ny horonan-tsary
Fantaro bebe kokoa momba ny interface sy ny volavolan'ilay smartwatch Xiaomi izay haseho amin'ny fomba ôfisialy amin'ny herinandro ambony.
Sivanina ny sary voalohany amin'ny smartwatch Xiaomi
Jereo ny famolavolana finday Xiaomi miaraka amin'ny Wear OS izay haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 5 Novambra any Shina, nambaran'ny tale jeneraliny.
Xiaomi dia hanolotra ny famantaranandrony miaraka amin'ny Wear OS amin'ny herinandro ambony
Fantaro bebe kokoa momba ny daty fanolorana ofisialy ny smartwatch Xiaomi voalohany izay hampiasa ny Wear OS ho rafitra fiasa ary ho tonga amin'ity fararano ity.
Tsaho isan-karazany milaza fa afaka mividy Fitbit i Google
Ny goavam-pikarohana dia mety amin'ny fifampiraharahana haka ny orinasa Fitbit, iray amin'ireo mpitarika ao amin'ny tsenan'ny smartwatch
Huawei Watch GT 2: Famakafakana ny smartwatch vaovao an'ny marika
Fantaro misimisy kokoa momba an'ity famakafakana ny Huawei Watch GT 2 an'ny marika sinoa azonay notsapaina tato anatin'ny herinandro ity ary avelanay ny hevitray momba izany
Ny Xiaomi Mi Band 5 miaraka amin'ny NFC dia azo alefa manerantany
Fantaro bebe kokoa momba ny tsaho fa ny Xiaomi Mi Band 5 izay havoaka amin'ny taona ho avy dia hanana kinova miaraka amin'ny NFC ho an'ny rehetra.
Fantaro ny zava-drehetra momba ny fanombohana ny Samsung Galaxy Watch Active 2 amin'ny fomba ofisialy any Espana izay ahafahantsika mividy azy amin'ny magazay.
Huawei Watch GT 2: Smartwatch vaovao an'ny marika
Fantaro bebe kokoa momba ity Huawei Watch GT 2 vaovao ity, ny smartwatch vaovao an'ny marika sinoa natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly.
Google dia afaka mampiseho smartwatch eo akaikin'ny Pixel 4
Fantaro misimisy kokoa momba ireo tsaho vaovao momba ny mety fanolorana smartwatch vaovao nataon'i Google amin'ny volana Oktobra.
Huawei Watch GT2 dia haseho miaraka amin'ny Mate 30
Jereo ny volavolan'ny Huawei Watch GT2 vaovao izay haseho amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny Huawei Mate 30 ary efa ofisialy ny endriny.
Ny Honor Band 5 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny Honor Band 5 amin'ny fomba ofisialy any Espana izay ahafahantsika mividy ity fehin-tanana ity amin'ny marika sinoa.
Ny Galaxy Watch Active 2 dia ho tonga aloha kokoa amin'ny tsena sasany
Hijery misimisy kokoa momba ny fanombohana andrana ny Galaxy Watch Active 2 any amin'ny tsena sasany sahala amin'ny efa natoron'ny media samihafa any Amerika.
Amazfit GTS, Amazfit Stratos 3 ary Amazfit X: Miambina ilay Xiaomi vaovao
Fantaro ny momba an'i Amazfit GTS vaovao, Amazfit Stratos 3 ary Amazfit X, ireo fiambenana vaovao Xiaomi ho avy tsy ho ela.
Casio PRO TREK WSD-F21HR: Ilay fiambenana ara-panatanjahantena vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny Casio PRO TREK WSD-F21HR eny an-tsena, ny fijerena fanatanjahan-tena vaovao miaraka amin'ny Wear OS avy amin'ny marika ofisialy.
Misfit Vapor X: Ny smartwatch vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Fantaro bebe kokoa momba ny marika Misfit Vapor X an'ny marika izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy ary afaka mividy amin'ny tranokala ofisialiny isika izao.
Fantaro ny momba ny Fossil Gen 5, ny karazana smartwatches Wear OS vaovao izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy.
Fantaro ny momba ny Galaxy Watch Active 2, ilay famantaranandro Samsung vaovao izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny hetsika iray ary natomboka tamin'ny volana septambra.
Saripika tafaporitsaka an'ny Galaxy Watch Active 2 alohan'ny fampisehoana azy
Fantaro misimisy kokoa ireo sary voalohany navoakan'ny Galaxy Watch Active 2 an'ny marika Koreana izay ho avy tsy ho ela eo amin'ny tsena.
Nanamafy ny famolavolana sy ny ampahany amin'ny mampiavaka ny Samsung Galaxy Watch Active 2
Na ny famolavolana ny Samsung Galaxy Watch Active 2 sy ny mampiavaka azy ara-teknika dia samy voamarina taorian'ny nandalovany ny maso ivoho FCC.
Honor Band 5 dia amidy any Shina amin'ny andro voalohany
Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny Honor Band 5 any Shina izay efa namidy tao anatin'ny iray andro monja namidy tao amin'ny firenena ary mampanantena ny hivarotra tena tsara.
Honor Band 5: Ny brasele hetsika vaovao an'ny marika
Fantaro ny momba ny Honor Band 5, ilay fehin-tànana hetsika vaovao avy amin'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Sina tamin'ny hetsika iray.
Ahoana ny fananana Google Assistant amin'ny rindrambaiko Samsung Galaxy miaraka amin'ny GAssist
Asehonay aminao ny fomba fananana mpanampy Google amin'ny finday avo lenta Samsung Galaxy ary matetika voafetra amin'ny Bixby izy io.
Famerenana smartwatch Arbily ID205
Notsapainay ny smartwatch Arbily ID205 nandritra ny herinandro vitsivitsy, famantaranandro feno toy ny be indrindra amin'ny vidiny tsy hita lany. Ny smartwatch notadiavinao.
Amazfit GTR: rindrambaiko vaovao an'ny Xiaomi
Fantaro ny zava-drehetra momba ny Amazfit GTR avy amin'i Xiaomi izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny hetsika iray tany Shina. Famantaranandro vaovao.
Nanivana sary vaovao an'ny Galaxy Watch Active 2
Fantaro bebe kokoa momba ny sary vaovao an'ny Galaxy Watch Active 2 izay efa navoaka tamim-pomba ofisialy ary ahafahantsika mahita ny famolavolana famantaranandro.
Jereo bebe kokoa momba ity fampiroboroboana ny Xiaomi Mi Smartband 4 any Amazon ity izay ahafahanao mividy azy io miaraka amina fihenam-bidy manokana vonjimaika.
TicWatch Pro 4G / LTE: famantaranandro vaovao an'ny marika
TicWatch Pro 4G / LTE dia ofisialy izao. Fantaro ny zava-drehetra momba ny smartwatch vaovao an'ny marika izay efa manana fifandraisana 4G amin'ny fomba ofisialy.
Sivanina ny tsipiriany momba ny Honor Band 5
Jereo ny masontsivana voalohany an'ny Honor Band 5 ankoatry ny daty famoahana azy sy ny vidiny izay efa navoaka tao Alemana.
Ho tonga miaraka amin'ny Honor 5X ny Honor Band 9
Hijery misimisy kokoa momba ny fanolorana ofisialy ny Honor Band 5 izay mety hitranga amin'ny faran'ity volana ity araka ny nohamafisin'ny marika.
Ny Galaxy Watch Active 2 dia hitovy amin'ny Apple Watch
Fantaro misimisy kokoa ireo fiasa izay hananan'ny Galaxy Watch Active amin'ny taranany faharoa izay havoaka tsy ho ela eny an-tsena.
Fampiharana tena ilaina hampiasaina amin'ny Xiaomi Mi Band
Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa ireo izay azontsika ampiasaina amin'ny Xiaomi Mi Band hampiasa tsara kokoa ny bracelet amin'ny fotoana rehetra.
Ny taranaka faharoa an'ny Galaxy Watch Active dia ho hita amin'ny habe roa
Ny taranaka faharoa an'ny Galaxy Watch Active dia hamely ny tsena amin'ny kinova roa: 40 sy 44 mm, hahatratrarana mpanjifa mety ho betsaka.
Tonga any Eropa tsy misy NFC ny Xiaomi Mi Smartband 4
Fantaro bebe kokoa momba ny kinovan'ny Xiaomi Mi Smartband 4 no hamoahana any Eropa amin'ny farany araka ny efa fantatra.
Fanavaozana vaovao ho an'ny Samsung Galaxy Watch hanatsarana ny fitoniana an'ny Samsung Health
Ny Samsung Galaxy Watch dia nahazo fanavaozana vaovao izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahamarinan-toerana an'ny Samsung Health
Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Fantaro ny zava-drehetra momba ny fanombohana ny Xiaomi Mi Smartband 4 any Espana amin'ny fomba ofisialy, izay ny vidiny sy ny daty fandefasana azy dia efa ofisialy.
Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia ofisialy izao: Fantaro ny antsipiriany rehetra
Fantaro ny zava-drehetra momba ny Xiaomi Mi Smartband 4, ilay fehin-tanana vaovao vita amin'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Ny Xiaomi Mi Band 4 dia efa manana daty fanombohana any Eropa
Fantaro bebe kokoa momba ny daty fandefasana an'ity Xiaomi Mi Band 4 any Eropa ity izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity tany Shina.
Sivana ny sary ofisialy voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 4
Hijery misimisy kokoa momba ny sary izay efa navoakan'ity Xiaomi Mi Band 4 ity izay haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 11 Jona.
Ny Xiaomi Mi Band 4 dia aseho amin'ny 11 Jona
Amin'ny 11 Jona, Xiaomi dia hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny taranaka fahefatra amin'ny Mi Band.
Huawei sy Samsung, ny fitomboan'ny haingam-pandeha haingam-pandeha indrindra
Fantaro misimisy kokoa ny fiakaran'ny vidin'ny fitafiana Samsung sy Huawei, izay akaikin'ny marika amidy indrindra eny an-tsena.
Xiaomi Mi Band 4: Ny zavatra fantatsika hatreto
Jereo izay rehetra fantatsika hatreto momba ny marika Xiaomi Mi Band 4 an'ny marika sinoa izay tokony havoaka vetivety eny an-tsena.
Ahoana ny fomba hamahana ny olana amin'ny fampandrenesana amin'ny Smartwatches Sinoa
Ampianarinay ianao handrindrana smartwatch sinoa hamahana ny olan'ny fampandrenesana amin'ireo famantaranandro marani-tsaina ireo.
Ny Samsung Galaxy Watch manaraka dia hanana fifandraisana 5G
Ny taranaka manaraka an'ny Samsung Galaxy Watch dia mety ho ny smartwatch voalohany misy fifandraisana 5G
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny Galaxy Fit sy Fit E
Fantaro bebe kokoa momba ny famoahana ny Samsung Galaxy Fit any Espana izay ahafahany mividy amin'ny fomba ofisialy any amin'ny magazay.
Mahazatra hatrany ny mahita ny smartwach eo am-pelatanan'ny mpampiasa maro. Salama tsara ny tarika mpanisa ...
Eo am-pelatanantsika sy eo amin'ny tanantsika ny Samsung Galaxy Watch Active vaovao, mijanona miaraka aminay ary manao famakafakana henjana izahay.
Google dia manavao ny interface Wear OS
Fantaro misimisy kokoa momba ilay interface vaovao ampidirina ao amin'ny Wear OS miaraka amin'ireo karatra na Tiles izay efa nambaran'ny Google tamin'ny fomba ofisialy.
Ny smartwatch Michael Kors Sofie dia havaozina miaraka amin'ny fanatsarana andrasana indrindra
Ny mpanamboatra Michael Kors dia manohy miady mba hahazoana toerana eo amin'ny tsenan'ny smartwatch amin'ny alàlan'ny ...
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia mahatratra singa iray tapitrisa amidy any India
Fantaro misimisy kokoa ny fahombiazan'ny Xiaomi Mi Band 3 eo amin'ny tsena indiana, izay efa namidiny singa iray tapitrisa tao anatin'ny enim-bolana.
TAG Heuer Connected 45 "Golf Edition": Smartwatch lafo vidy vaovao
Fantaro ny momba ny TAG Heuer Connected 45 “Golf Edition”, ny smartwatch lafo vidy marika vaovao izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant: famantaranandro vaovao avy amin'ny marika
Jereo ny zava-drehetra momba ny Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant, ireo fiambenana vaovao amin'ny marika sinoa efa natolotra.
Ny Xiaomi Mi Band 4 dia hanana chip Bluetooth 5.0 sy NFC
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny Mi Band 4 dia manondro fa mety hanana Bluetooth 5.0 sy chip NFC handoavana vola izany
Tonga any Espana ny Samsung Galaxy Watch Active
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny smartwatch vaovao an'ny Samsung any Espana, ny Galaxy Watch Active izay azonao vidiana amin'ny fomba ofisialy izao.
Xiaomi dia handefa ny taranaka fahefatra amin'ny Mi Band 4 amin'ity taona ity
Ny taranaka fahefatra an'ny Mi Band, laharana 4, dia havoaka mandritra ity taona ity, raha ny filazan'ilay orinasa, saingy tsy nilaza mazava ny fotoana hanaovany izany.
Ny smartwatches tsara indrindra omena amin'ny fetin'ny ray
Raha mbola tsy nanapa-kevitra ny hividy smartwatch ianao, dia hasehonay anao hoe iza amin'ireo izay manana ny sandany tsara indrindra amin'ny safidy vola eo amin'ny tsena.
Fitbit dia nanolotra kinova vaovao an'ny Fitbit Versa, Lite, kinova mora vidy izay manapaka ny fiasa sasany amin'ny kinova feno.
Huawei dia handefa smartphone vaovao roa tsy misy Wear OS
Ny smartwatches roa manaraka izay havoakan'i Huawei eny an-tsena dia hotohizan'ny Wear OS, fipoahana bebe kokoa amin'ny filazan'i Google eo amin'ny tsenan'ny entina
Ny orinasa Swatch dia manameloka an'i Samsung amin'ny fakana tahaka ny tontolon'ny sasany amin'ireo fiambenana famantaranandro azy
Nametraka fitoriana tamin'i Samsung ilay mpanao famantaranandro iraisam-pirenena Swatch, satria nilaza izy fa naka tahaka ny dialin'ireo famantaranandrony malaza indrindra.
Samsung dia nanolotra ireo akanjo roa vaovao anaovany azy ireo: ny Galaxy Watch Acitve ary ny Galaxy Fit. Fitafiana roa ho an'ny filàna samihafa.
Ny kaonty OS dia mitazona kaonty latsaky ny 10% amin'ny varotra US
Ny rafitra fandidiana ho an'ny smartwatches Google no tsy dia be mpampiasa, araka ny fanadihadiana farany navoaka tany Etazonia.
Gadjet tsara indrindra omena amin'ny Andron'ny mpifankatia
Androany izahay dia manolotra ny safidy dimy tsara indrindra hahitanao ny fanomezana ara-teknolojika indrindra ho an'ny mpifankatia, gaga ny mpiara-miasa aminao amin'ny gadget manara-penitra
Sary sy fiasa voasivana amin'ny Samsung Galaxy Watch Active
Ny fivoahana iray hafa dia mampiseho ny toetran'ny smartwatch Samsung manaraka antsoina hoe Galaxy Watch Active, ho avy miaraka amin'ny Galaxy S10 ve izy io?
Ny sary voalohany an'ny Galaxy Sport dia voasivana, tsy misy famadihana bezel sy fitaratra miolakolaka
Taorian'ny tsaho efa amam-bolana maro, nivoaka farany ihany ny sary voalohany amin'ny hoe hanao ahoana ny famantaranandro manaraka an'ny orinasa Koreana: Galaxy Sport
Salmona sy Medaka, no kaody kaody amin'ny Pixel Watch ho avy
Fanamafisana iray hafa ihany koa fa ny goavam-pikarohana dia miasa amin'ny Pixel Watch samihafa izay hanomboka eny an-tsena atsy ho atsy.
Ny Samsung Galaxy Sport dia azo aseho miaraka amin'ny Galaxy S10
Taorian'ny nahazoana mari-pahaizana FCC, ny Galaxy Sport dia afaka nahita ny mazava tamin'ny fomba mitovy tamin'ny Galaxy S10
Jereo ireto rindranasa dimy ireto izay tsy tokony hanjavona amin'ny smartwatch misy ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa hahazoana bebe kokoa amin'izany.
Ny Samsung Gear S3 dia nohavaozina miaraka amina asa vaovao
Fantaro bebe kokoa momba ny fanatsarana tonga amin'ny Samsung Gear S3 miaraka amin'ny fanavaozana vaovao izay nanomboka natomboka tany Etazonia.
Google manangona vola $ 40 tapitrisa amin'ny fizarana smartwatch an'ny Fossil
Google sy Fossil dia nanambara ny fifanarahana efa azon'izy ireo ho an'ny goavambe fikarohana hahazoana ampahany amin'ny fananana ara-tsaina izay novolavolainy
Ny fandikana aloha ny Galaxy Sport dia mampiseho bezela malama
Ny fandikana voalohany dia voasivana izay ahitantsika ny fomba ahatongavan'ny Galaxy Sport eny an-tsena raha ny bezel ribbed mahazatra, fa amin'ity taranaka ity dia milamina izany.
TicWatch E2 sy TicWatch S2: Ireo fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Fantaro bebe kokoa momba ny TicWatch E2 vaovao sy TicWatch S2, ny fijerena Wear OS izay naseho tamin'ny fomba ofisialy ny marika tao amin'ny CES 2019.
Tsy ho ela ianao dia afaka mifehy ny milina fanasan-dohanao Whirlpool amin'ny smartwatch anao amin'ny Wear OS
Ny mpanamboatra fitaovana marani-tsaina dia hanampy fanampiana amin'ny Wear OS mandritra ny taona, ary hamela anay hitantana azy ireo amin'ny fomba iray avy eo amin'ny hatotanay
Samsung dia efa miasa amin'ny Galaxy Watch Sport
Ny orinasa Koreana Samsung dia nanomboka niasa tamin'ny Galaxy Watch Sport, kinova fanatanjahan-tena an'ny Galaxy Watch izay natolotry ny orinasa tamin'ny volana aogositra lasa teo.
Zeblaze THOR 4 Plus, finday avo lenta misy famataranandro 100 euro fotsiny
Amin'izao fotoana izao, ary miankina amin'ny fampiasantsika ny smartphone, ny asa na ny fiainantsika manokana, dia mety ...
Raha reraka ianao amin'ny fampiasana ilay famantaranandro mitovy amin'ny finday Android Wear anao, dia izao ny fanovana azy.
Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Android Wear
Raha nila nila naka pikantsary ny terminal misy anao tantanan'ny Android Wear na Wear OS ianao, dia asehonay anao ny fizotrany hanatanterahana izany.
Wear OS H: Ilay kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa
Jereo ny vaovao rehetra tonga ao amin'ny Wear OS H, ilay kinova vaovao amin'ny rafitry ny fiambenana izay havoaka amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela.
Tidal dia nanambara ny fanombohana ny fampiharana azy manokana ho an'ny smartwatches Samsung
Ny sehatry ny mozika streaming Tidal, dia vao avy nandefa ny rindrambaiko voalohany azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny finday avoakan'i Samsung tantanan'ny Tizen.
Fossil Sport: Manaova OS sy Snapdragon Wear 3100 ho an'ity finday ity
Fossil Sport: Ny smartwatch voalohany miaraka amin'ny Snapdragon Wear 3100. Jereo bebe kokoa momba ny smartwatch Wear OS vaovao an'ny marika.
Ny Fitbit Charge 3 dia efa mamela anao hametraka valiny haingana amin'ireo mpampiasa Android
Ny Fitbit Charge 3 dia nahazo fanavaozana izay ahafahanao mamaly ny hafatra amin'ny alàlan'ny valiny haingana napetraka.
Ny Honor Watch dia efa manana daty fampisehoana
Navoaka tamin'ny 31 Oktobra ny Honor Watch. Fantaro bebe kokoa momba ny daty hanehoana amin'ny fomba ofisialy ny Honor Watch.
Lenovo Watch S sy Watch C: famantaranandro mahafinaritra sy famantaranandro marani-tsaina ho an'ny ankizy
Ny Lenovo Watch S sy ny smart Watch Watch C dia ofisialy. Ianaro daholo ireo fitaovana vao natomboka ireo.
Spotify for Wear OS dia hahafahantsika mivezivezy eo amin'ireo lisitra, ireo hira voatahiry ary maro hafa
Ny kinova Wear OS an'ny Spotify dia nahazo fanavaozana lehibe izay manitatra ny isan'ny fiasa natolony hatreto.
Huawei Watch GT dia rindrambaiko vaovao tsy misy Android Wear
Adinoy ny Android Wear miaraka amin'ny Huawei Watch GT vaovao izay mahatratra roa herinandro ny androm-piainany raha tsy ampiasaina ny GPS sy ny sensor ho an'ny fo.
Ny interface Wear OS vaovao dia manomboka mahatratra ny famantaranandro voalohany
Manomboka manavao ny interface Smart OS vaovao ny Smartwatches. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana tonga amin'ny fiambenana.
Google dia nanambara ny vaovao lehibe izay ho tonga amin'ny man ode Wear OS 2.1
Ny Apple Watch ve no smartwatch tsara indrindra eny an-tsena?
Ny andiany 4 an'ny Apple Watch manokana dia manolotra karazana "hatramin'ny" 18 ora, tsy isalasalana fa ny batterie dia mbola ny ombelahin-tongony Achilles
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametahana hoditra fiambenana maimaim-poana amin'ny Amazfit
Tonga ilay fiambenana Xiaomi vaovao miaraka amin'ny NFC, sensor amin'ny tahan'ny fo ary maro hafa
Huami Amazfit Verge no famantaranandro Xiaomi izay hijanona any Shina ankehitriny. Famantaranandro miaraka amin'ny sensor amin'ny tahan'ny fo sy ny NFC.
Ny Huawei Watch GT sy Honor Watch dia voamarina
Ny Huawei Watch GT sy Honor Watch voamarina any Eropa. Fantaro misimisy kokoa momba ireo famantaranandro vaovao roa avy amin'ny marika sinoa ireo
Snapdragon Wear 3100: Ilay mpikirakira vaovao ho an'ny Wear OS
Snapdragon Wear 3100: Ny fiasa ho an'ny fiambenana Wear OS. Fantaro bebe kokoa momba ity processeur vaovao ity amin'ny marika efa natolotra.
Google dia tsy hanolotra smartwatch vaovao amin'ity taona ity
Betsaka ny tsaho manodidina ny Android Wear, WearOS ankehitriny, mandritra ny taona. Raha nikasa ny hampangatsiaka ny lampihazo i Google ary nanamafy ilay goavam-be mpikaroka ao amin'ny Internet fa tsy hanolotra smartwatch amin'ity taona ity.
Xiaoxun Children Smartwatch S2, smartwatch lafo vidy natao ho an'ny ankizy
Ny Xiaoxun Children Smartwatch S2 dia natomboka tany Sina. Ianaro daholo ny momba ity smartwatch vaovao lafo vidy natao ho an'ny ankizy ity.
Ny Xiaomi Mi Band 3 misy any Espana manomboka anio
Azonao atao izao ny mividy ny Xiaomi Mi Band 3 any Espana. Fantaro bebe kokoa momba ny famoahana ny fehin-tànana marika sinoa any Espana.
Ny Samsung Galaxy Watch dia misy any Espana izao
Ny Galaxy Watch dia amidy amin'ny fomba ofisialy any Espana. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny famantaranandro marika Koreana vaovao.
Xiaomi dia mijanona ho marika faharoa azo amidy indrindra
Xiaomi no marika faharoa be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra ny marika sinoa amin'ity fizarana ity.
Huawei dia tsy nanadino ireo smartwatches, mitady hanavao izy
Nilaza ny Tale jeneralin'ny Huawei fa tsy nanadino ilay faritra tamin'ny famantaranandro marani-tsaina ny orinasa fa kosa mitady hamorona mpifaninana mendrika
Tsy hamoaka ny Pixel Watch i Google amin'ity taona ity
Ny Pixel Watch an'ny Google dia tsy hanomboka amin'ity taona ity. Fantaro bebe kokoa ny antony tsy hanombohan'ny Google Watch amin'ny taona 2018.
Casio Pro Trek WSD-F30: ny famantaranandro ho an'ny fialamboly
Casio Pro Trek WSD-F30: famaritana, vidiny ary fandefasana. Fantaro ny momba an'ity smartwatch maranitra ity izay naseho tao amin'ny IFA.
Ny ankamaroan'ny famantaranandro dia hanavao ilay kinova Wear OS vaovao
Ny kinova vaovao an'ny Wear OS dia hahatratra ny ankamaroan'ny famantaranandro. Jereo ireo maodely izay hahazo ny fanavaozana an'ity kinova vaovao ity.
Havaozina miaraka amina interface vaovao ny Wear OS. Jereo ny fanovana izay ampidirin'i Google amin'ny interface ny rafitry ny fiambenana.
Google dia miasa amin'ny mpanampy azy manokana
Google Coach: mpanampy amin'ny fahasalamana Google. Fantaro bebe kokoa momba ny mpanampy atolotry ny orinasa atsy ho atsy.
Samsung Galaxy Watch: Ny fanavaozana ny famantaranandro Samsung
Samsung Galaxy Watch: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny famantaranandro vaovao avy amin'ny marika Koreana natolotra androany.
Fossil dia hanolotra ny smartwatches vaovao ao amin'ny IFA 2018
Fossil dia hanolotra ny smartwatch an'ny taranaka fahefatra ao amin'ny IFA 2018. Fantaro bebe kokoa ny famantaranandro vaovao nataon'ny mpanamboatra tsy ho ela.
Qualcomm hampiditra ny processeur vaovao an'ny smartwatch amin'ny volana septambra
Qualcomm dia hampiditra ny fikirakirana smartwatch vaovao azy amin'ny 10 septambra. Fantaro bebe kokoa momba ny Snapdragon vaovao an'ny marika.
Avereno jerena ny GPS Smartwatch Leo Sport Sp958 ambany sarany. Ankehitriny noho ny fihenam-bidy amin'ny tapakila. amin'ny € 56.75 !!
Ny tranokalan'i Samsung dia manivana ny sary ofisialy voalohany an'ny Galaxy Watch
Iray amin'ireo fitaovana noresahintsika indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy, ary tsy smartphone izany, dia ny Galaxy Watch, smartwatch an'ny orinasa. Ny sary voalohany an'ny Galaxy Watch dia tsy avy amina fivoahana iray, fa avy aminy tranokala Samsung ihany. any Etazonia.
Ny Galaxy Watch dia haseho miaraka amin'ny Note 9 ary tsy hitondra Wear OS
Ny Samsung Galaxy Watch, raha antsoina izany amin'ny farany, dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 9 Aogositra miaraka amin'ny Note 9, ary hitondra Tizen fa tsy Wear OS.
Armani dia manambara ny fizotrany vaovao miaraka amin'i Google Assistant
Azonao atao izao ny mahafantatra ireo famantaranandro Armani vaovao izay miavaka amin'ny fananana Google Assistant ao amin'ny Connected Wear OS.
Samsung dia afaka nanolotra ny Galaxy Watch amin'ny IFA 2018
Ny Samsung Galaxy Watch dia azo aseho amin'ny IFA 2018. Jereo bebe kokoa momba ny daty fampisehoana ny fiambenan'ny orinasa Koreana.
Ny Huawei TalkBand B5 dia haseho amin'ny 18 Jolay
Huawei dia hampiditra ny Huawei TalkBand B5 amin'ny 18 Jolay. Fantaro bebe kokoa momba ny daty fampisehoana ny fehin-tànana vaovao amin'ny marika sinoa.
Huawei dia nanao pataloha smartwatch hahafahanao mitahiry ny headphones
Huawei dia nanao pataloha smartwatch hahafahanao mitahiry ny headphones. Fantaro bebe kokoa momba ny patanty vaovao ho an'ny marika sinoa.
Andininy voalohany momba ny Google Pixel Watch
Google Pixel Watch: Andininy voalohany sy daty famoahana. Fantaro bebe kokoa momba ny smartwatch an'ny Google Wear OS amin'ity fararano ity.
Snapdragon Wear 2500: Miloka amin'ny smartwatches ho an'ny ankizy ny Qualcomm
Snapdragon Wear 2500: Processeur ho an'ny famantaranandro ho an'ny ankizy. Filokana Qualcomm amin'ny famantaranandro ho an'ny kely indrindra amin'ny trano.
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao anatin'ny 17 andro
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia mahatratra singa iray tapitrisa amidy. Hijery misimisy kokoa momba ny fahombiazan'ny generasi vaovao tanan-tànana Xiaomi ao Shina.
Russia 2018. Ity no smartwatch an'ny mpitsara tantanin'ny Wear OS
Nankinin'ny FIFA ny orinasa Suisse Hublot hitantana ny fampandrenesana VAR
Samsung's Gear S3 no fitaovana fampitaovana mety indrindra ho an'ny mpiasa hotely
Ny orinasa koreana dia nanova ny smartwatch Gear S3 ho fitaovana tena tsara handefasana ny fangatahan'ny mpanjifa any amin'ny hotely
Ny Samsung Gear S4 dia hanana bateria lehibe kokoa noho ny teo alohany
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny Samsung Gear S4 dia hamely ny tsena amin'ny fahaleovan-tena lehibe kokoa, hampitombo ny an'ny S4 3n 90 mAh.
Wear OS dia tsy hitantana ny Gear S4 an'ny Samsung manaraka
Ny orinasa Aziatika Samsung dia tsy hampiasa ny Android Wear amin'ny farany ho toy ny rafitra fiasan'ny smartwatch manaraka, ny Samsung Gear S4
Riley Touchscreen Smartwatch: Ilay fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Famantaranandro an'i Riley Touchscreen Smartwatch Marc Jacobs miaraka amin'ny Wear OS. Fantaro bebe kokoa momba ny smartwatch vaovao izay mamely ny tsena izay mampiasa ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa.
Asus VivoWatch BP: Ny smartwatch vaovao mandrefy ny tosi-dranao
Asus VivoWatch BP: Ny famantaranandro maranitra izay mandrefy ny fahasalaman'ny mpampiasa. Fantaro bebe kokoa momba ny famantaranandro Asus vaovao, izay natolotry ny orinasa tamin'ny hetsika iray tany Taiwan.
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia natokana in-640.000 XNUMX tany Sina
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia mahazo famandrihana 640.000 any Shina. Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny bracelet ao amin'ny firenenao izay nahazoanao famandrihana alohan'ny hamidy voalohany.
Huawei Watch 2 (2018): Ilay fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Huawei Watch 2 (2018): Famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny fiambenana ny marika sinoa izay tsy mamela antsika hanana zava-baovao raha ampitahaina amin'ny taranaka teo aloha.
Xiaomi Mi Band 3: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny fehin-tànana fihetsika Xiaomi vaovao izay efa natolotra androany tamin'ny hetsika marika marika sinoa.
Nanivana ny vidin'ny Xiaomi Mi Band 3
Efa tafaporitsaka ny vidin'ny Xiaomi Mi Band 3. Fantaro misimisy kokoa ny vidin'ny fehin-tànan'ny marika sinoa rehefa mahatratra ny tsena.
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia haseho amin'ny 31 Mey
Voamarina: Hanolotra ny Xiaomi Mi Band 3 i Xiaomi amin'ny 31 Mey. Hijery misimisy kokoa momba ny hetsika fampisehoana ny marika sinoa izay ahafahantsika miandry ny fampisehoana ny fehin-tànanao.
TicWatch Pro: Ny fiambenana miaraka amin'ny WearOS izay maharitra 30 andro
TicWatch Pro: Ilay fiambenana miaraka amin'ny WearOS sy efijery roa. Fantaro misimisy kokoa momba ny fampisehoana fiambenana indroa, noho izy afaka mamonjy bateria ary maharitra 30 andro.
Ny Samsung Gear S4 dia hitantana amin'ny OS OS fa tsy amin'ny Tizen
Araka ny tsiliantsofina farany, ny smartwatch manaraka amin'ny Samsung's Gear S range dia azo entina amin'ny OS OS fa tsy Tizen.
Xiaomi sy Apple dia miady amin'ny fahaiza-mitarika eo amin'ny tsenan'ny akanjo. Fantaro misimisy kokoa ny momba ny varotra marika ato amin'ity faritry ny famantaranandro marani-tsaina sy fehin-tanana ity izay mitombo hatrany.
Ny sary voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3 dia voasivana
Ny sary voalohany ho an'ny taranaka fahatelo an'ny Xiaomi Mi Band 3 dia nasiana sivana, ary toerana ahitanao ny endrika fitohizan-javatra nefa miaraka amin'ny efijery misy fampahalalana bebe kokoa.
Samsung dia miasa amin'ny smartwatch miaraka amin'ny Wear OS
Samsung dia miasa amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS. Hijery misimisy kokoa momba ilay famantaranandro mety ho avy amin'ny marika Koreana amin'ity taona ity.
Google dia miasa amin'ny Smartwatch Pixel izay ho tonga amin'ny fararano. Fantaro bebe kokoa momba ny smartwatch vaovao miasa ny marika.
Google Assistant for Wear OS dia nohavaozina miaraka amin'ny fiasa vaovao
Google Assistant for Wear OS dia nohavaozina miaraka amina endrika telo. Fantaro bebe kokoa momba ireo fiasa vaovao tonga amin'ny mpanampy amin'ny famantaranandro marani-tsaina.
Google sy Fitbit dia hiasa amin'ny fitafy entina mandrefesana ny fahasalaman'ny mpampiasa
Google sy Fitbit dia handefa fitaovana azo entina handrefesana tsara kokoa ny fahasalamana. Fantaro bebe kokoa ny drafitry ny orinasa roa te hiditra amin'ny sehatry ny fahasalamana.
Xiaomi dia mampiseho ny sary voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3
Xiaomi dia manambara ny sary voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3. Fantaro bebe kokoa momba ny sary voalohany amin'ny fehin-tànana marika izay efa nanambara ny endriny hananany.
Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android Wear and Wear OS
Ny fampiharana dimy tsara indrindra ho an'ny Android Wear and Wear OS. Jereo ity safidin'ireo fampiharana azonao apetraka amin'ny famantaranandronao ity.
Ny tetika farany tsara indrindra amin'ny famantaranandronao miaraka amin'ny Android Wear
Ny tetika farany tsara indrindra amin'ny famantaranandro amin'ny Android Wear. Jereo ity andiam-pitaka ity ho an'ny mpampiasa amin'ny famantaranandro amin'ny Android Wear. Amin'izany fomba izany dia hahazo bebe kokoa amin'ny smartwatch ianao.
Sivana ny angona voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3
Navoaka ny tahiry voalohany momba ny Xiaomi Mi Band 3. Fantaro misimisy kokoa momba ny fehin-tànana vaovao amin'ny marika sinoa andrasana hamely ny tsena amin'ity taona ity
Wear OS Developer Preview 1: Ny kinova vaovao an'ny Wear OS dia efa misy ankehitriny
Azo sintonina izao ny Wear OS Developer Preview 1. Fantaro misimisy kokoa momba ny kinova fijerena voalohany ny rafitra miasa nohavaozina ho an'ny smartwatches Google.
Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy ny Google Pay for Wear OS
Google Pay dia tonga amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS any Espaina. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanombohana ny rindranasa fandoavam-bola izay mahatratra ny fiambenana miaraka amin'ny rafitra fiasa Google.
Ireo dia smartwatches Android Wear rehetra izay havaozina ho Wear OS
Ny fanovana avy amin'ny Android Wear ho amin'ny Wear OS an'i Google dia ofisialy izao. Raha manana fanontaniana ianao raha havaozina ny smartwatch anao, dia asehonay anao ireo maodely mifanaraka aminy rehetra.
Wear OS: Ofisialy ny famerenana Android Wear
Wear OS: Ofisialy izao ny kinova Android Wear vaovao. Fantaro bebe kokoa momba ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa ho an'ny famantaranandro marani-tsaina izay efa ofisialy ary ho avy tsy ho ela.
Fitbit Versa: rindrambaiko finday mora vidy amin'ny marika
Fitbit Versa: famaritana ny smartwatch mora vidy vaovao. Fantaro bebe kokoa momba ny famantaranandro vaovao an'ny marika izay misy vidiny ambany kokoa noho ny maodely maro eny an-tsena.
Nanova ny anarany ny Android Wear ary lasa Wear OS
Wear OS: Nomena anarana maharitra ny Android Wear. Fantaro bebe kokoa momba ny anarana vaovao an'ny rafi-piasan'ny smartwatch izay manomboka mahazo ireo mpampiasa,
Google dia manambara indray, izay fitaovana nohavaozina amin'ny Android Oreo ary hahavita izany tsy ho ela
Ny fanavaozana vaovao lehibe an'ny rafitra fiasa Android ho an'ny smartwatches dia hahatratra fitaovana vaovao 5, araka ny lisitra vao nohavaozina tao amin'ny tranokalany Google.
Ny smartwatches tsara indrindra hanaraha-maso ny asantsika ara-batana
Raha efa nieritreritra nandritra ny fotoana kelikely ianao fa tonga ny fotoana handaoana ny pulsa mpanisa hanombohana hampiasa smartwatch, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao hoe iza amin'ireo manana smartwatches tsara indrindra mamela antsika hanara-maso ny asanay sy hanararaotra ireo asany fanampiny .
Android Wear 2.9 dia hanana kaontera ho an'ny fampandrenesana mbola tsy voavaky
Nanambara ny sasany amin'ireo fiasa vaovao amin'ny Android Wear 2.9. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao izay entin'ny fanavaozana ny fiambenana vaovao.
Tonga eto ny Android Wear 2.8 ary mitondra vaovao
Zava-misy ny Android Wear 2.8 ary mamela vaovao maro. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao miaraka amin'ny fanavaozana ireo famantaranandro.
Modular mifandray: Ny famantaranandro vaovao avy amin'ny TAG Heuer
Modular Connected 41: TAG Heuer dia manolotra famantaranandro kely kely. Fantaro bebe kokoa momba ny smartwatch vaovao amin'ny marika malaza.
Blocks: ny smartwatch modular miaraka amin'ny Android efa amidy
Blocks: ny smartwatch Android modular dia efa zava-misy. Fantaro bebe kokoa momba ny famantaranandro modular voalohany tonga amin'ny Android amin'ity modely ity.
Ireo no famantaranandro Android Wear natolotra tao amin'ny CES 2018
CES 2018: Mihaona amin'ireo famantaranandro vaovao amin'ny Android Wear. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fizaram-paritra vaovao naseho tao amin'ny CES 2018.
Google dia manamafy ny fizotran-tsaina izay hanavao ny Android Oreo
Lisitry ny smartwatches feno izay manavao ny Android Oreo. Jereo ny lisitra nambaran'i Google miaraka amin'ireo maodely izay havaozina.
Android Oreo dia tonga amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Android Wear 2
Android Wear 2.0 dia mijery ny fanavaozana ny Android Oreo. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny smartwatches amin'ny kinova vaovao.
Ny famantaranandro Samsung Gear Sport dia misy any Espana izao
Samsung Gear Sport dia efa amidy any Espana. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiambenana fanatanjahan-tena Samsung vaovao azo alaina amin'ny tsena Espaniôla
Manomboka tonga ao amin'ny Samsung Gear S3.0 ny Tizen 3
Samsung dia nanomboka nanamboatra fanavaozana vaovao ny rafitra fiasa ho an'ny Samsung Gear S3.
Ireo mpividy iitone fitbit voalohany dia mitatitra ny olan'ny pairing sy ny pairing
Ireo mpividy voalohany an'ny Fitbit Ionic dia nameno ireo dinika ofisialin'ny orinasa nitaraina momba ny olana maro samihafa amin'ny smartwatch.
SKAGEN Signatur T-Bar ny famantaranandro fidiovana indrindra amin'ny vehivavy
SKAGEN Signatur T-Bar, smartwatch misy hybrid miaraka amin'ny fanapahana vehivavy misy marika, satria ny firavaka dia tsy mifanaraka amin'ny haitao.
Fitbit dia nanambara ny Ionic, famantaranandro maranitra izay mikendry ny handresy ny Apple Watch
Ny Fitbit Ionic no rindrambaiko feno voalohany an'ny Fitbit miaraka amin'ny GPS, sensor amin'ny tahan'ny fo, ny rafitra fiasany ary ny fanoherana ny rano.
Jereo ny smartwatches sinoa tsara indrindra miaraka amin'ny tahan'ny kalitao / vidiny tsara, amin'izay, mandany vola kely dia afaka mividy famantaranandro feno ianao. Nohavaozina Oktobra 2021
Samsung hanangana smartwatch Gear S vaovao miaraka amin'ny Gear Fit 2 Pro
Ny lohan'ny fizarana finday Samsung dia manamafy fa amin'ny herinandro ambony dia hanolotra smartwatch Gear S vaovao ny orinasa amin'ny foara IFA 2017
Ny smartwatches mora vidy tsara indrindra
Mitady smartwatch mora vidy? Aza adino ity fisafidianana rindrambaiko mora vidy tsara indrindra eny an-tsena ity. Nohavaozina Oktobra 2021
Ny Samsung Gear Fit 2 Pro dia havoaka miaraka amin'ny Galaxy Note 8
Ny Samsung Gear Fit 2 Pro dia ho fitaovana fanatanjahan-tena vaovao an'ny Samsung, ary ho tonga amin'ny fanarahana milomano, fanohanana ivelan'ny Internet ho an'ny Spotify, sy maro hafa.